खाग काटिएकाे अवस्थामा भेटियो मृत गैंडा ! - dautarimedia.com
खाग काटिएकाे अवस्थामा भेटियो मृत गैंडा !
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा खाग काटिएका अवस्थामा मृत गैंडा फेला परेको छ । निकुञ्जको माडी बगइ सेक्टर अन्तर्गत घाँघरको बाटुलिचौरमा अन्दाजी २० वर्षको गैंडा मृतावस्थामा भेटिएको हो ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निकुञ्जमा चार गैंडा चोरी सिकारीले मारेका थिए भने प्राकृतिक कारणले २८ मरेका थिए । चालू आवका साउनमा मात्रै प्राकृतिक कारणले पाँच गैंडा मरेका छन् । यो सहित ६ गैंडा मरेका हुन् । निकुञ्जले गस्ती कार्यलाई तीव्रता दिएको भए पनि चोरी सिकार रोकिन सकेको छैन
Previous: ‘दुर्लभ’ आँपका बोटलाई सुरक्षा दिन ६ कुकुर र चार गार्ड
Next: सबैको प्यारी बिनिता यसरी ए’क्कासी ह’स्पिटल पुगिन् आयो यस्तो रि’पोर्ट (हेर्नुस् भिडियो)